भोलिको खण्डग्रास साढे ३ घण्टा लामो, राशी अनुसार के फल प्राप्ती हुनेछ ? – Gorkhali Voice
भोलिको खण्डग्रास साढे ३ घण्टा लामो, राशी अनुसार के फल प्राप्ती हुनेछ ?
२०७७, ६ असार शनिबार १७:३७
भोली असार ७ गते आइतबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण लाग्दैछ ।
बिहान १० बजेर ५० मिनेटमा स्पर्श हुने यो खण्डग्रास सुर्यग्रहण मध्यान्न १२ बजेर ३८ मिनेटमा मध्य र अपरान्ह २ बजेर २३ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ । यो ग्रहणको अवधि ३ घण्टा ३३ मिनेटको हुनेछ । यो ग्रहण मृगशिरा, आर्द्रा नक्षत्र र मिथुनमा हुनेछ।
यो ग्रहणले सबै राशि चिन्हलाई असर गर्दछ। कुनै राशिलाई यो ग्रहणले आर्थिक सबलता प्रदान गर्छ भने कुनै राशिलाई ऋण लाग्न पनि सक्ने जनाउँछन ज्योतिशहरु ।
अर्को तर्फ, कुंडलीमा ग्रहण दोष पनि उनीहरूमा विशेष प्रभाव पार्दैछ। मिथुनमा जाने सौर्य ग्रहणले कसरी तपाईंको राशि चक्रमा तपाईंको ग्रहणलाई असर पार्नेछ भनेर थाहा पाउनुहोस्
यहाँ ज्योतिषीहरूले यो ग्रहणबाट कुन कुन राशिलाई के कस्तो लाभ हानी पुर्‍याउँछ भन्ने जानकारी गराइएको छ ।
भोली करिब ६ घण्टा लामो सुर्य ग्रहण्, नेपालबाट करिब साढे ३ घण्टा खण्डग्रास देखिने
ग्रहणको प्रभावका कारण छर-छिमेकको कारणले तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । साथै, बच्चाहरूको बारेमा तपाईँको चिन्ता पनि बढ्नेछ । तर पिता वा उच्च अधिकारीको सहयोग रहनेछ।
घर परिवारमा तनाव बढ्न सक्नेछ । धन सम्पतीको नोक्सानी हुन सक्नेछ । व्यर्थको चिन्ता बढ्न सक्नेछ ।
तपाईंको राशिफलमा सूर्यग्रहण छ, त्यसैले रक्तचापका बिरामीहरू विशेष सचेत रहुनु आवश्यक छ। प्रतिष्ठालाई असर गर्ने केहि कार्य नगर्नुहोस्।
तपाईंको विलासितामा धेरै पैसा खर्च हुनसक्नेछ। बोलिमा पनि संयम राख्नुपर्नेछ अन्यथा हानिको सम्भावना छ। रचनात्मक प्रयासहरू सफल हुनेछन ।
तपाईलाई ग्रहणको प्रभाव लाभदायक हुनेछ। आर्थिक पक्ष पनि सबल हुनेछ। बहुप्रतीक्षित कामले आत्मविश्वास बढाउनेछ।
ग्रहणको प्रभावबाट पिता वा उच्च अधिकारीबाट सहयोग पुग्नेछ। पद र प्रतिष्ठा बढ्न सक्नेछ ।
बहुप्रतिक्षित कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने व्यर्थको तनाव हटाउनेछ। तपाईंलाई रचनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ।
सवारी चलाउँदा सावधानी अपनाउनुहोस्। घूस लेनदेन नगर्नुहोस । शारीरिक वा आर्ठीक नोक्सानी हुन सक्छ।
ससुराली पक्ष सँग मनमुटाव हुनसक्छ। तपाईंको जीवनसाथीको स्वास्थ्यबारे सचेत रहनुहोस्।
ग्रहणले रोग र शत्रुहरूलाई बढाउनेछ, जसले मानसिक समस्या निम्त्याउनेछ। बच्चाको प्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ। रीस नियन्त्रणमा राख्नुहोस ।
तपाईंको जीवनसाथीको स्वास्थ्यबारे सचेत रहनुहोस्। बच्चाकोप्रती जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्। शिक्षा र प्रतिस्पर्धामा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुनेछ। सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ ।
व्यक्तिगत जिवनमा तनाव आउनसक्छ, तर गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ। तपाईंले रचनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ।